कोरोना भाइरस : सार्क देशमा तीन जनाको ज्यान गयो, कहाँ कति प्रभाव ? – Halkhabar kura
कोरोना भाइरस : सार्क देशमा तीन जनाको ज्यान गयो, कहाँ कति प्रभाव ?
काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का ८ सदस्य देशमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण तीन जनाको ज्यान गएको छ । तीन सय ८५ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने २१ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ३ सय ६१ जनाको उपचार भइरहको छ ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिलेसम्म विश्वका एक सय ६२ देशमा पुगेको छ । मङ्गलबार बिहानसम्म एक लाख ८२ हजार चार सय १२ जनामा सङ्क्रमण भएकोमा ७९ हजार सय ११ जना सङक्रमित उपचारपछि निको भएका छन् ।
ज्यान गुमाउनेको सङख्या सात हजार एक सय ५७ पुगेको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का ८ सदस्य देशमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण तीन जनाको ज्यान गएको छ । तीन सय ८५ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने २१ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ३ सय ६१ जनाको उपचार भइरहको छ ।
Previous प्रदेश २ को स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन आज मतदान हुने
Next चलचित्र पत्रकार संघको ८औ महाअधिवेशनबाट दिनेश सिटौला अध्यक्षमा निर्वाचित